बालबालिकामा कोरोनाको त्रास : डर कम गर्न परिवारले के गर्ने ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बालबालिकामा कोरोनाको त्रास : डर कम गर्न परिवारले के गर्ने ?
शनिवार, असार ६ २०७७
कैलाली, ६ असार । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–६ का कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षीय साजन विक एक महिनादेखि चिन्तित थिए । साजनका मनमा एक किसिमको डर थियो कोरोनाको ।
भारतबाट अभिभावकसँगै फर्किएकी घोडाघोडी नगरपालिका–५ की १२ वर्षीया बालिकाले क्वारेन्टिनमा अभिभावकसँगै दुई हप्ता बसेर घर फर्कँदा कैदी थुनिने कारागार बसेर आएझैँ लागेको बताइन् ।
क्वारेन्टिनमा बस्दा सँगै बसेकाहरूले कोरोनाले सबैलाई सिध्याउँछ के गर्ने होला भनेको सुनेदेखि उनलाई कोरोना एकदमै खतरनाक रहेछ भन्ने लागेको थियो । कोरोना लागेकै कारण आफूहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेको होला भन्ने सोचले पिरोलिने चौधरी अभिभावक र स्वास्थ्यकर्मीले सम्झाएपछि चिन्ता कम बनाएको उनले बताइन् ।
विद्यालय बन्द हुनाले सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष असर तिनमा परेको एसओएस बालग्राममा बालबालिकामा देखिने मानसिक समस्या सम्बन्धी परामर्श दिइरहेका सहजकर्ता दिनेश भट्टराईको भनाइ छ ।
‘बालबालिकाको विद्यालय कहिले खुल्छ, ठेगान छैन, उनीहरूको मनमा विद्यालय नखुलेका कारण अनेक किसिमका भावना खेलिरहेका हुन्छन् र त्यसले मनोविज्ञानमा असर पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी सिर्जनशील काममा सक्रिय बनाउन अभिभावकले ध्यान दिनुपर्छ’, भट्टराईले सुझाव दिए ।
भीम रावल पनि केन्द्रीय सदस्यमा विजयी
अछाममा बस दुर्घटना : दुई जनाको ज्यान गयो, ठूलो क्षतिको आशंका